बैतडिको पाटन नगरपलिकास्थित खोेड्पे स्थानीय बर्खाको समयमा पनि पानीको हाहाकारमा छन् । हरके वर्षहरु झै यो वर्ष पनि उनीहरुले पानीको संकट व्यहोरीरहेका छन् । हरेक सिजनहरुमा उनीहरुलाई पानीको हाहाकार मच्चीएको छ । उनीहरुलाई पिउने पानीको समस्या एक दमै खड्की रहेको छ । यहाँ हिँउदको समस्या त जहिले पनि उस्तै थियो । तर, बर्खाको समयमा पनि म्ुहानमा पानी आउदैन । गाउँमा पानी लागी प्रयोग हुदै आएका पानी मुलहरु करिब १० वर्ष पहिले मात्र सुकेका हुन । जब देखी पानीका ुमलहरु सुके तब देखी स्थानीयले यो समस्या खेप्दै आईरहेका छन् ।
लिफ्ट खानेपानी योजना सम्पन्न भए पनि विद्युत आपूर्ति नियमित नहुँदा पानीको अभाव झेल्नु परेको स्थानीयको भनाइ छ । दुई सय भन्दा बढी परिवार काकाकुल वातावरणमा बाँचिरहेको उनीहरुले जनाएका छन् ।
करिब १० हजार परिवारले दैनिक खानेपानीको सास्ती भोग्दै आएको स्थानीय गगनबहादुर ऐर बताउँछन् । ‘खोड्पे बजारका दुई सय परिवार मात्र होइन दैनिक खोडपे बजारमा आउने १० हजार बढी सर्वसाधारण र यात्रीले खानेपानीका लागि निकै सास्ती भोग्नु परेको छ’, उनले भने–‘२०६४ सालमा निर्माण कार्य सुरु भएको लिफ्ट खानेपानी आयोजना सम्पन्न भइसक्दा पनि उस्तै समस्या छ ।’
उनले खानेपानीको हाहाकार भएपछि १० बर्ष अघि निर्माण सुरु भएको लिफ्ट खानेपानी योजना निर्माण सम्पन्न भइसक्दा पनि विद्युत प्रशारण नियमित नहुँदा नगरवासीले खानेपानीको चरम समस्या भोग्नु परेको बताए ।
‘खोड्पे बजार देखि अढाई किलोमिटर टाढाको भट्टीखोलाबाट लिफ्ट मार्फत पानी तानेर वितरण हुने गरेको छ’ सिद्धेश्वर खोड्पे खानेपानी योजनाका सचिव मोहन बिष्टले भने–‘हप्तामा तीन दिनपनि विद्युत आपूर्ति नियमित हुन नसक्दा लिफ्ट खानेपानी योजनाबाट आउने पानी बन्द हुने गरेको छ ।’
खानेपानी डिभिजन कार्यालय बैतडीको ६० लाख र उपभोक्ताको ४० लाख गरि एक करोडमा सम्पन्न उक्त खानेपानी योजना संचालनपछि पनि पानीका लागि सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नु परेको सचिव बिष्टले बताउँछन् । उनले भने–‘हिमपात हुने उचाईमा रहेको खोड्पे बजारमा सामान्य हावा चल्दा पनि विद्युत सेवा दिनुहँ अवरुद्ध हुने गरेकाले खानेपानीबाट बंञ्चित हुनु परेको हो ।’
सोलार सिष्टमबाट पानी तान्ने योजना अहिलेसम्म बनेको छैन । यस्तो योजना नबन्दासम्म स्थानीयवासीले खानेपानीको संकट भोगिररहने सचिव बिष्टले बताए । ‘१ सय ३ परिवार बजार क्षेत्रका बासिन्दा र सालभाडी, मल्लो खोड्पे, पनाली लगायतको गाउँका बासिन्दा पनि पानीबाट बंञ्चित भएका छन ।’ उनले भने ।
विद्युत समस्यालाई लिएर पटक–पटक खानेपानी डिभिजन कार्यालय र विद्युत प्राधिकरणलाइ जानकारी गराउँदा पनि समस्या समाधान हुन नसकेको सर्व साधारणले गुनासो गरेका छन ।
लिफ्ट खानेपानी योजना सुरु भएपछि हरेक परिवारले ६ युनिट पानीका लागि महिनाको ३ सय रुपैंया भुक्तानी गर्दै आएका छन । ६ युनिटभन्दा बढी पानी प्रयोग गरेमा थप प्रति युनिटको एक सय रुपैंया उपभोक्ताले भुक्तानी गरिरहेका छन । स्थानीय उपभोक्ता धर्म रोकायाले भन्छन्–‘कम्तिमा ५० हजार लिटरको रिजर्व टंकी निर्माण हुन सक्यो भने विद्युत नियमित भएका समय पानी रिजर्व हुन सक्थ्यो ।’ खानेपानी योजनामा सोलार जडान गर्नु पर्ने वा ५० हजार लिटरको टंकी निर्माणको अर्को विकल्प नभएको पनि उनले बताए ।
आकाशबाट पानी वर्षिरहेको छ । तर, एक जर्किन खानेपानी लिनका लागि आउँदा जाँदा ८ किलोमिटर दैनिक पैदल यात्रा गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयले बताएका छन् । खोड्पे बजारका उपभोक्ताले दैनिक गाडी भाडामा लिएर पानी नबोके होटल व्यवसाय नै संचालन गर्न सक्ने स्थिति नरहेको गुनासो गरेका छन । डडेलधुरा, बैतडी, बझाङ र दार्चुला जाने दर्जनौं यात्रुबाहक सवारी साधनका यात्रुहरु खोड्पे बजारमा खाना खाने गरेका छन् । तर, खानेपानी अभावका खाना खाने यात्री लगाय स्वयम् व्यवसायीहरुलाई सास्ती भइरहेको छ ।
पानी संकटले व्यवसाय नै चौपट भएको स्थानीय होटल व्यवसायी जयबहादुर बोहराले बताए । ‘लिफ्ट खानेपानी योजनाबाट पनि नियमित पानी आपूर्ति हुन नसक्दा व्यवसाय नै छोड्न पर्ने बाध्यता आएको छ ।’ उनले भने । पानी नहुँदा होटल व्यवसाय ठप्प हुने अवस्था आएको होटल व्यवसायीले बताएका छन् ।
विद्युत प्राधिकरण बैतडीले विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था मिलाएको दावी गरेको छ । अग्लो डाँडामा निरन्तर चल्ने हावाहुरीका कारण विद्युत सेवा ठाउँ–ठाउँमा ‘फोल्ड’ हुने गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । विद्युत लाइन वितरण गर्दा गुणस्तरहीन काम भएकाले खोड्पे क्षेत्रमा विद्युत समस्या पटक–पटक भइरहेको स्वयम् विद्युत कर्मचारीले बताएका छन् ।
राप्रपाले तोक्यो २० विभाग र समिति प्रमुख, पढनुहोस् कसको भागका कुन ?
डा. केसीका माग पुरा गर्दा सार्वभौम जनता र लोकतान्त्रिक अभ्यासको अपमान हुन्छः प्रचण्ड
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले पारित गर्यो सुझाव सहित कार्यविधि
सुनिल छिदालको पहिलो गीत बजारमा हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
रवि आचार्यको ‘संसारै भुलिजान्छु म’ सार्वजनिक, हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
चम्पादेवि गाउँपालिकाको शिक्षा प्रति चाँसो बढ्दो